Ebe Spanish abụọ emere na mbụ n'ụwa akpọrọ dị ka "Ebe Sanitized"
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Ebe abụọ a na-akpọ Spen na nke mbụ amatara na ụwa dị ka “Ebe Sanwụtọ”
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Mmanya & mmuo
Ebe abụọ a na-akpọ Spen na nke mbụ amatara na ụwa dị ka “Ebe Sanwụtọ”
Disco Tropics na Lloret de Mar
Marina Beach Club dị na Valencia na Disco Tropics na Lloret de Mar (Girona) bụ ebe izizi abụọ na Spain na ụwa gaferefe ihe niile achọrọ iji nweta akara ọcha mba ụwa "Ebe Sanitized", nke ndị a kwalitere Nighttù Mba Na -ahụ Maka Ndụ. Akara "Ebe Sanitized" dị ugbu a bụ naanị akara nhicha mba ụwa ahaziri nke ọma maka ebe ndụ abalị gburugburu ụwa. Ebumnuche ya bụ inye aka nwetaghachi ntụkwasị obi nke ndị ahịa ụlọ ọrụ ahụ ozugbo ebe ndụ abalị na-enwe ike imeghe. Akara ahụ bụ nkwenye doro anya na ebe ndị a na-ekwu okwu, dị ọcha ma kpochapụ ya dị ka o kwere mee, ma n'otu oge ahụ na-etinye ihe na usoro iji chebe ahụike nke ndị ahịa na ndị ọrụ.
Mmejuputa akwara a na-agbaso usoro iwu siri ike ka ihe mere na nso nso a na South Korea, ebe klọb ise na enweghị usoro nchebe ahụike kpatara ntiwapụ nke ọrịa, enweghị ike imegharị. N'ihi ihe a merenụ, Seoul Mayor Park Won-n'oge na-adịghị anya nyere iwu ka ụlọ ịgba egwu abalị 2,100, ụlọ nnabata nnabata, na discos mechie ruo mgbe ebighị ebi na mmetụta ozugbo. O kwuru, "akpachapụghị anya nwere ike ibute mgbawa na-efe efe". Yabụ, iji zere ụdị nsogbu a, akara "Ebe Sanitized" nke ndị klọb Spanish a kpọtụrụ aha rụpụtara chọrọ kemịkalụ kemịkalụ oge niile nke ebe ahụ, wụnye ndị na-ehicha aka, ọrụ nke ndị ọrụ iyi akwa na mkpuchi, ịnwe uwe na ihe mkpuchi dị maka ndị ahịa, iwebata usoro nhicha na disinfection siri ike, usoro maka ịnara ọnọdụ okpomọkụ nke ndị ahịa, akwụkwọ mmado na-enye nkọwa maka ndụmọdụ maka ndị ahịa, ịgba ume ịkwụ ụgwọ kaadị na-enweghị kọntaktị, usoro maka ịtụ ihe ọ drinksụ drinksụ site n'ebe dị anya, na nhọrọ, ịmebata usoro ọcha ikuku n'etiti ndị ọzọ usoro nchekwa dị ọcha. Ọzọkwa, akara ahụ chọrọ ọzụzụ na usoro omume maka ndị ọrụ niile nọ ebe ahụ ka ha abụọ wee ndị ọrụ nchekwa na ndị na-arụ ọrụ na ebe a na-agba egwu, ebe a na-esi nri, ebe a na-eri nri, ebe a na-eme akwa, wdg, mara etu esi eme ihe oge niile. Ọ bụ Linkers, ụlọ ọrụ ọkachamara na ọzụzụ na họtel na ụlọ ọrụ mmepụta ihe mepụtara ọzụzụ a.
N'otu aka ahụ, ọ dị mkpa igosipụta na akara mba ụwa a chọrọ nnabata, site na ebe ndị mejuputara ya, yana ụkpụrụ ime obodo nke mba ọ bụla gbasara ahụike na nchekwa, ọbụlagodi na akwadoro iwu ndị a mgbe enyerela akara ahụ. Anyị achọpụtala n’oge na-adịbeghị anya na ụlọ ọrụ dị iche iche na-akwalite akàrà na asambodo ndị akpọrọ “COVID-free” “enweghị nje” na-akwalite mkpọsa ụgha ma mepụta olile anya ụgha, nke nwekwara ike ibute nsogbu iwu. Site na International Nightlife Association, anyị achọpụtala mkpa ọ dị ịmepụta ngwaọrụ a maka ndị nwe azụmaahịa na-ahụ maka ndụ abalị, ndị ahịa, na ndị ọrụ ebe ọ bụ na oria COVID-19 malitere. Anyị malitere ịmụ ihe ụfọdụ dị mkpa nke ebe a na-eme ndụ abalị ma họrọ aha na-akọwapụta ebumnuche, nke na-enwe ebe ndụ abalị dị ka ihe dị ọcha na nje. Nsogbu COVID-19 bụ nso nso a ma ọ nweghị ụzọ ọ bụla mmadụ nwere ike isi hụ na oghere dị na COVID-19 ma ọ bụ nje ọ bụla ọzọ.
Ka ọ dị ugbu a, United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), ndị Italian Nightlife Association (SILB-FIPE), ndị American Nightlife Association (ANA), na ndị Colombia Nightlife Association (Asobares Colombia) na-akwado akara a. N'otu aka ahụ, ụlọ oriri na nkwari abalị sitere na mba dịka Romania, Croatia, Mexico, Portugal, Israel, na Morocco rịọkwara ka e mejupụta ya. N'okwu Joaquim Boadas, Secretary General nke International Nightlife Association, "Ebumnuche bụ iru ọtụtụ mba dị ka o kwere mee, dịka ebumnuche nke akara a bụ ịnye ndị ọrụ na ụlọ ọrụ n'ụwa niile nchekwa, ka , ọbụna tupu ha aga njem, ha nwere ike ịchọpụta ebe egwuregwu dị na ebe ahụ mejuputara akara ọcha nke mba a ma nye ha na ezinụlọ ha udo na ịdị jụụ na a ga-echedo ha. Maka nke a, anyị na ndị United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) na-enwe mmekọrịta na-adịgide adịgide, site na International Nightlife Association, anyị arịọkwa maka nkwado ha iji mejuputa ya na ndị otu ha niile.
Ebe abụọ a ama ama amaalarịrị akara mba ụwa ndị ọzọ dị mma
Ebe abụọ a enyerela akara Sanitized Venue, Marina Beach Club Valencia, na Disco Tropics, enwetakwala akara nchekwa mba ụwa (International Nightlife Safety Certified) nke na-egosi ọdịiche dị ka ebe nchekwa na ọkwa mba ụwa. Akara a choro ebe ndi mejuputara ya ka ha nwee ume iku ume nke ha na-apụ mgbe ha na-apụ ka ndị ahịa nwee ike ịnwale ule iku ume iji zere ihe mberede okporo ụzọ, ndị na-eme ka obi dịghachi ndụ ma ọ bụrụ na ndị ahịa na-ata ahụhụ obi, usoro iwu iji gbochie mmekọahụ mwakpo, ndị na-achọpụta ọla iji gbochie ntinye nke ngwa ọgụ n'ebe ahụ, nyocha ọgwụ dị n'elu iji gbochie ntinye nke ihe, nyocha nke ndị na-agbanyụ ọkụ, ọnụ ụzọ ụzọ ọpụpụ mberede, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ chọrọ iji mee ebe ndị ahụ "Ebe Nchekwa".
Ejirila akara nchekwa mba ụwa a kemgbe afọ 2013. Ebumnuche bụ isi bụ ịkọwapụta ebe ndị ahụ siri ike na nchekwa nke ndị ahịa ha na ndị ọrụ ha na ndị na-abụghị. Kpamkpam, International Association of Nightlife kpebiri ịmalite akara nchekwa mba ụwa a na-esote ọkụ na ụlọ ịgba egwu na-enweghị ikike na Brazil nke na-erughị ụkpụrụ nchekwa nchekwa elementrị kachasị, na-akpata ọnwụ 234.